Thiha Lu Lin: February 2012
Posted by Thiha Lu Lin at 5:18 PM6comments
Posted by Thiha Lu Lin at 11:30 AM5comments
“ယခုတွင် ယုံကြည်ခြင်း၊ မျှော်လင့်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊ ဤသုံးပါးတည်လျက်ရှိ၏။ ဤသုံးပါးတို့တွင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် အမြတ်ဆုံး ဖြစ်သတည်း။” - ၁ကော ၁၃:၁၃
“And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love.” - 1Corinthians 13:13
မနက်က ကျမ်းစာပိုဒ်ကို Facebook နဲ့ ကိုယ့် Blog ကနေ ဝေမျှဖို့ ရွေးချယ်တော့ သတိရမိသွားတဲ့ ကျမ်းပိုဒ်လေးက ခုလို ချစ်သူများနေ့နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ချစ်သူများနေ့ဆိုပြီးတော့ ချစ်သူချင်းပဲ လက်ဆောင်တွေပေး၊ မေတ္တာတွေ ဖလှယ်နေကြပေမယ့် ချစ်သူများဆိုတဲ့နေရာမှာ တကယ်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ မိဘတွေ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါ ပါဝင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ လောကမှာ အင်အားအကြီးဆုံးလို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို သက်ဝင်ယုံကြည်လက်ခံပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဆိုတဲ့နေရာမှာ တဏှာရောယှက်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ၊ အေးမြပြီး လူတိုင်းအပေါ်ခွင့်လွှတ်သည်းခံတတ်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုး၊ ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်အပြည့်နဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျိုးကို သက်ဝင်ယုံကြည်လက်ခံတာပါ။ ဘယ်လိုနေရာ၊ အခြေအနေမျိုးမှာမဆို ချစ်ခြင်းမေတ္တာစိတ်အပြည့်နဲ့ ငါသာ သူ့နေရာမှာသာဆို ဆိုတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေး ဖြစ်တတ်ဖို့ လိုတယ်ထင်မိပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးပျော်ကြတဲ့ ချစ်သူများနေ့ဆိုတဲ့ Valentine's Day ကတော့ တစ်နှစ်တစ်ခါ အလှည့်ကျ ရောက်လာခဲ့ပြန်ပါပြီ။ ဒီလိုအချိန်မှာ လိုလိုလားလား ဆုတောင်းပေးချင်တာကတော့ ချစ်သူတိုင်း ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံပြီး ဆုံဆည်းနိုင်ကြပါစေ။ အနာဂတ်ခရီးလမ်း သာယာဖြောင့်ဖြူးနိုင်ပါစေ။
Posted by Thiha Lu Lin at 12:00 AM 1 comments
သူရယ် . . .
နတ္ထိပါပဲ . . .။
ဟိုး . . . အဝေးကြီးမှာပါ . . . သူရယ် . . .။
Credit: သူဖတ်ဖို့ အချစ်ကဗျာများ
Posted by Thiha Lu Lin at 11:35 PM0comments
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သိပ်ချစ်၊ သိပ်မြတ်နိုးလို့ လက်ထပ်ခဲ့ကြတဲ့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူတို့ဟာ အိမ်ထောင်သက်တမ်းနှစ်နှစ်လောက် ရှိလာကြပြီ။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက စာပေဝါသနာပါပြီး ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် စာရေးလေ့ရှိတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ သူဟာ ဓါတ်ပုံဆရာလည်း လုပ်သေးတယ်။ သူတို့ မင်္ဂလာဆောင်တုန်းကပုံတွေကို အမြတ်တနိုးသိမ်းထားလေ့ရှိတယ်။ သူတို့ဟာ သိပ်ချစ်ကြပါတယ်။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက အေးတိအေးစက်နေတတ်သလောက် သူ့ရဲ့ ဇနီးက ဒေါသထွက်လွယ်တယ်။ သူနဲ့ နားလည်မှုလွဲပြီး မကြာခဏ ရန်ဖြစ်ရတယ်။ အခုလည်း သူတို့ကြားမှာ ပြဿနာလေးတစ်ခုက ရှိနေပြန်တယ်။
Posted by Thiha Lu Lin at 12:00 PM3comments
Posted by Thiha Lu Lin at 7:35 PM 1 comments
တက်ညီလက်ညီ လှော်မည်တဲ့ လှော်မည်
မွန်၊ ရှမ်း၊ ကယား နဲ့ ကရင် တို့တွေ
ဗမာ၊ ချင်း၊ ရခိုင် နဲ့ ကချင် တို့ရေ
ကြုံတွေ့လာသမျှ အခက်တွေ၊ တင်ကျန်ရစ်တဲ့ အခဲတွေ
ညီညာဖြဖြ ကြေစေဟဲ့ ကြေစေ
တူတာတွေ ပေါင်းစုလို့ ညီညာကြမသွေ
ဒီလိုကဗျာလေးမျိုး (မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် ထက်သန်ရေး ဆိုရမလား) ရေးတာ၊ ခု ကျောင်းသားမဟုတ်တော့တဲ့ အရွယ်မှာ ဒါ ပထမဆုံးပါပဲ။ ဒီနှစ်မှာ ကျရောက်တဲ့ ပြည်ထောင်စုနေ့ ကို ဂုဏ်ပြုပြီးတော့ ရေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော် ရေးနေကြပုံစံလည်း မဟုတ်တော့ ကြောင်တောင်တောင်တော့ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီနှစ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ဆောင်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်လာတာလည်း ပါလာတော့ ကျွန်တော်စမ်းရေးချင်လာလို့ပါ။ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က စာစီစာကုံးနဲ့ ကဗျာတွေကို ခုလို နေ့ထူးနေ့မြတ်တွေအတွက် ပြိုင်ပွဲတွေလုပ်တုန်းကတော့ ဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် မြို့နယ်အဆင့်တောင် မပါခဲ့တဲ့ ဘဝပါ။ ခုတော့လည်း စာတွေရေးဖြစ်နေတဲ့သူ တစ်ယောက် ဖြစ်နေပါတယ်။ ခုတော့ ပြည်ထောင်စုနေ့ကို ဂုဏ်ပြုချင်လို့ ပြီးတော့ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ မြန်မာပြည်ကြီး အေးချမ်းအောင်လို့ ရည်ရွယ်ပြီး ကိုယ်တတ်သလောက်လေးနဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ် ဖွဲ့သီလိုက်ရပါတယ်။
Posted by Thiha Lu Lin at 11:02 PM4comments
Posted by Thiha Lu Lin at 2:06 PM2comments
မခံစားနိုင်လို့ . . . ကျွန်တော်တို့ဟာ နာကျင်မှုက ရှောင်ပြေးတတ်ကြတယ် . . .
မခံစားနိုင်လို့ . . . ဝမ်းနည်းမှုကနေ ထွက်သွားတတ်ကြတယ် . . .
မခံစားနိုင်လို့ . . . မြတ်နိုးတဲ့ တစ်စုံတရာကို ထားသွားတတ်ကြတယ် . . .
မခံစားနိုင်လို့ . . . ချစ်ရက်နဲ့ မုန်းချင်ယောင် ဆောင်ခဲ့ကြတယ် . . .
မခံစားနိုင်လို့ . . . တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဝေးခဲ့ကြတယ် . . .
အဆုံးသတ်ကျတော့ . . . မခံစားနိုင်လို့ . . . လို့ ပြောကြပေမယ့် . . .
တကယ်တမ်းမှာတော့ . . . ပိုခံစားနေလိုက်ရတာ ကိုယ်ဖြစ်နေတတ်တယ် . . .
တန်ဆောင် (Media Wave)
ဒီစာလေးကို သိပ်သဘောကျလို့ ခွင့်မတောင်းဘဲ Facebook ကနေ ကူးတင်ဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ခုလိုတင်တာ သဘောမကျခဲ့ရင် သက်ဆိုင်သူကာယကံရှင်မှ ကျွန်တော့ကို မေးလ်ပို့ပြီး ဖြုတ်ခိုင်းနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Posted by Thiha Lu Lin at 12:50 PM4comments
Posted by Thiha Lu Lin at 10:50 PM4comments
တစ်ခါတရံမှာ အမြဲတမ်းပြုံးနေဖို့ မလွယ်သလို၊ အမြဲတမ်း ခေါင်းမော့ထားဖို့လည်း မလွယ်လှပါဘူး။ စိတ်ဓါတ်တွေကျတဲ့အခါ ခြေလှမ်းတွေ လေးလံတဲ့အခါ၊ ပထမဆုံး စိတ်အားတက်ကြွမှုတွေ လျော့ကျသွားတဲ့ အခါမှာပေါ့။
Posted by Thiha Lu Lin at 10:09 PM0comments
ငါ. . . နေထိုင်ပါတယ် . . .။
Posted by Thiha Lu Lin at 10:18 PM3comments
Posted by Thiha Lu Lin at 12:39 AM5comments
Posted by Thiha Lu Lin at 10:29 PM3comments